နေအိမ် / ဂရိနိုင်ငံအနုညာတစီရင် / စာတိုက်ဘဏ်. ဂရိသမ္မတနိုင်ငံဂရိအမျိုးသားကြွေးမြီနှင့်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်
21/01/2017 အားဖြင့် IAA ကွန်ယက်
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ပါဝင်လာခြင်းအပေါ်အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကို (ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသဘောတူညီချက် - PSI), ဒါဟာအတွက်ဂရိအစိုးရငွေချေးစာချုပ်များ၏ 'ဆံပင်ညှပ်' 'ကိုရည်ညွှန်းသည် 2012, အရာတစ်ဦးချင်းစီပိုင်, သိသိသာသာချို့ယွင်းမှု, ဂရိဘဏ္ဍာရေးအကျပ်အတည်းနှင့်ကြွေးမြီပြန်လည်ဖွဲ့စည်းအထုပ်များ၏အခြေအနေတွင် ('' အာမခံငွေများ '') နိုင်ငံတကာငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့်ဥရောပယူနီယံ. က 2015 တစ်ခုံသမာဓိတရားရုံး PSI ၏တရားဝင်မှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ဖို့တောင်းခဲ့သည်, နိုင်ငံခြားနှောင်ကြိုးပိုင်ရှင်များအားဖြင့်စိန်ခေါ်ခဲ့သော (စာတိုက်ဘဏ်), ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအငြင်းပွားမှုများအခြေချခြင်းများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာအောက်ရှိ (ICSID).
အဆိုပါခြားနားချက်ယေဘုယျအားဖြင့်အမျိုးသားစီးပွားရေးအကျပ်အတည်းများနှင့်စပ်လျဉ်းအများအပြားစိတ်ဝင်စားဖို့မေးခွန်းများကိုပေါ်ထွန်း, ဒါပေမယ့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခုံသမာဓိတရားရုံးနောက်ဆုံးတွင်ထိရောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ယူရန်ငြင်းဆန်, တစ်ချိန်ကအုပ်ချုပ်, ဒါကြောင့်အမှုကိုနားထောငျဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်ပါဘူး.
ဆုံးဖြတ်ချက်၏အရေးအကြီးဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ကိုလက်မခံဖို့တရားရုံး၏ငြင်းဆန်ဖြစ်ပါသည် ကိစ္စ၏သဘောသဘာဝ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီသက်ဆိုင်ရာများမှာ, သောနှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်ခဲ့သည် ("BIT") ဂရိနိုင်ငံနှင့်ဆလိုဗက်ကီးအကြား, နှင့် ICSID ကွန်ဗင်းရှင်း. အထူးသ, တရားရုံးကျင်းပ, အနှောင်အဖွဲ့အထက်ပါအခြေအနေများ၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာတစ်ဦးကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်.
အပိုဒ်လက်အောက်တွင် 1 ဂရိနိုင်ငံနှင့်ဆလိုဗက်ကီးအကြားနှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသဘောတူညီချက်, အဆိုပါအသုံးအနှုန်းအပေါ်ယံပိုင်းပါဝင်သည်:
". . . (ခ) ရှယ်ယာနှင့်စတော့ရှယ်ယာနှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်ကုမ္ပဏီများတွင်ပါဝင်မှုတခြားပုံစံ debentures,
(က c) ချေးငွေများ, ပိုက်ဆံမှတစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဏ္ဍာရေးတန်ဖိုးကို "ရှိခြင်းစာချုပ်အောက်တွင်မဆိုစွမ်းဆောင်ရည်မှတောင်းဆိုမှုများ.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်များ၏အနက်အခြေခံမူအပေါ် အခြေခံ., တရားရုံးကြောင်းဖော်ပြထား, အဆိုပါ BIT ကှနျ့၏ကျယ်ပြန့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ပါရှိသောပေမယ့်, ဒီဆိုလိုပါဘူး, အဆိုပါပါတီများဤသည်၌ပိုင်ဆိုင်မှုအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကိုမျိုးထည့်သွင်းရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်း.
အကျိုးဆက်, ကုမ္ပဏီ၏မြို့တော်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ကိုင်ပြီးအကြားခွဲခြား, ပုဒ်မခွဲမှာဖော်ပြထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေအရှင်ကင်းလွတ်ခွင့်ခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့် (ခ). ထိုအခါကြိုးနှင့်ချေးငွေအကြားခြားနားချက်အလေးပေး, အမှတ်, အနှောင်အဖွဲ့စာချုပ်အောက်မှာချေးငွေများအဖြစ်ကာကွယ်မပေးနိုင်ကြောင်းနှင့်မည်သည့်အမှု၌အနှောင်အဖွဲ့စာချုပ်အားဖြင့်ခေါင်းစဉ်မပေးခဲ့, Poštová Banka ဂရိနိုင်ငံတော်ကတိုက်ရိုက်ကုန်သွယ်ဘယ်တော့မှအဖြစ်, ဒါပေမယ့်သာ Clearstream မှတဆင့်. ထိုကွောငျ့, ချည်နှောင်ခြင်းကိုဖြစ်စေပစ္စည်းအောက်မှာမကာကွယ်ထားခဲ့ကြသည် (က c).
အထက်ပါတွေ့ရှိချက်များပေးထား, တရားရုံးဆနျးစစျဖို့မလိုအပ်ပါဘူးခဲ့သည်, အနှောင်အဖွဲ့အပိုဒ်တစ်ခုအောက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလျှင် 25 အဆိုပါ ICSID စာချုပ်. မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကဆိုပါတယ်, ဒီဆောင်းပါး၏နယ်ပယ်အတွင်းမကျဘူး.
က 2016, ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆန့်ကျင်အယူခံဝင်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပိုဒ်အောက်ရှိ "မျှတမှုမရှိခြင်း" ၏အယူခံအပေါ်သာမှီခို 52 အဆိုပါ ICSID စာချုပ်, သူကဖျောင်းဖျမပယ်ချ သင့်ရာကို ကော်မရှင်အယူခံဝင်.
အဆိုပါ PSI ကဲ့သို့သောဆွေးနွေးတင်ပြမခံခဲ့ရပေမယ့်, အထက်ပါခုံသမာဓိကတရားဝင်မှုတိုးမြှင့်ခဲ့, အထူးသဖြင့်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်မှန်၏ဥရောပတရားရုံးအပြီး Mamatas နှင့် အခြားသူများက v. ဂရိနိုင်ငံ (ရရှိနိုင် ဒီမှာ), အလားတူကောက်ရောက်ရှိရာ.
နိဂုံးချုပ်, ဖြစ်ရပ်မှန် Postova Banka အမျိုးသားရေးကြွေးမြီကိုရည်မှတ်အငြင်းပွားမှုများကိုဖြေရှင်းရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနုညာတစီရင်၏အရေးပါမှုကိုအလေးပေး, အထူးသဖြင့်ပြည်နယ်များနှင့်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအကြား.
 စာတိုက်ဘဏ်, a.s. နှင့် ISTROKAPITAL SE အတွက်. ဂရိသမ္မတနိုင်ငံ, ICSID ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ. ARB / 13/8, ၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဆုချီးမြှင့်9ဧပြီလ 2015, ရရှိနိုင် http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw4238.pdf.
 Ibid မသန်စွမ်း. 287-88.
 Ibid မသန်စွမ်း. 333-34.
 Ibid မသန်စွမ်း. 337-50.
 စာတိုက်ဘဏ်, a.s. နှင့် ISTROKAPITAL SE အတွက်. ဂရိသမ္မတနိုင်ငံ, ICSID ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ. ARB / 13/8, ၏ပယ်ဖျက်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက် 29 စက်တင်ဘာလ 2016, ရရှိနိုင် http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7587.pdf.
အောက်မှာ Filed: ဂရိနိုင်ငံအနုညာတစီရင်, ICSID အနုညာတစီရင်, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအနုညာတစီရင်သုတေသန, ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူပြည်နယ်အငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး